काठमाडौं । चीनको बेइजिङमा आयोजित बीआरआई फोरममा सहभागी भएर आइतबार बिहान ११ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रनासाथ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको मोबाइलको घन्टी बज्यो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको फोन थियो । प्रम सचिवालयबाट गरिएको फोनमा उनलाई भनियो, ‘कमरेड ! पोलिटब्युरो गठनलगायत पार्टी एकताका बाँकी काममा छलफल गर्न आज दिउँसो २ बजे तपाईंसँग प्रधानमन्त्रीज्यूको भेटघाटका लागि समय तय भएको छ, त्यही खबरका लागि फोन गरेको, हजुर आइदिनुहोला ।’ भनेको समयमा एक मिनेट पनि ढिला नगर्ने नेता नेपाल २ बजे नै बालुवाटर पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री निवासको भित्री कक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालबीच झन्डै चार घन्टा छलफल भयो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका र सल्लाहकार समूहका समेत कुनै सदस्यलाई प्रवेश दिइएको थिएन । नेता नेपाल एकैचोटि साँझ ६ बजे त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए ।
दुई नेताबीच चार घन्टासम्म के छलफल भयो भन्ने प्रधानमन्त्री टिमका सदस्यहरूलाई बढी कौतूहलता भएको थियो । उनीहरूको अनुमान थियो, ‘दुई नेताबीच पोलिटब्युरो गठनलगायत एकताका बाँकी काममा सहमति जुट्यो ।’ पछिल्लो समय जिल्ला कमिटीको एकता पनि सहमतिमा टुंग्याएर राम्रो सन्देश दिएका नेताहरूले पनि अरू काम पनि सहमतिमै टुंगो लगाउने भए भन्ने पर्नु अस्वाभाविक पनि थिएन । ११ महिनापछि नेकपाको स्थापना दिवसको अवसर पारेर वैशाख ९ मा बल्लतल्ल जिल्ला अध्यक्षको एकता टुंग्याए पनि पोलिटब्युरो गठन, जनवर्गीय संगठनको एकता, केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारीको काम बाँकी नै छ । वैशाख ९ गतेको कार्यक्रममा पनि पूर्वनिर्धारित अरू कार्यक्रममा जानुपरेकाले थोरै समय बसेर कार्यक्रमस्थलबाट वरिष्ठ नेता नेपाल महासचिव विष्णु पौडेललाई जानकारी दिएर बाहिरिएका थिए । तर, यसलाई पनि नेपालको असन्तुष्टिका रूपमा बाहिर प्रचार गरिएको थियो । त्यसको पर्सिपल्टै नेपाल चीन प्रस्थान गरेका थिए । त्यसो त तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि चाहे सरकारमा मन्त्रीहरू पठाउने सन्दर्भमा होस्, चाहे अरू विभिन्न नियुक्ति हुन् अथवा पार्टी एकतापछि पनि चाहे प्रदेश कमिटी गठन गर्दा होस् वा चाहे अरू कुनै विषयमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी गर्दै आएका थिए । पार्टीभित्र सल्लाह नगर्ने यस्तो प्रवृत्तिको नेता नेपालले विभिन्न मञ्चहरूमा असहमति प्रकट गर्दै आएका थिए ।
आखिर चार घन्टाको बालुवाटार बैठकमा के भयो त ? यसबारे नेता नेपालसँग सोध्दा उनले भने, ‘पार्टी एकताको बाँकी कामबारे छलफल गर्न बोलाइएको थियो, तर चार घन्टा बस्दा विषय प्रवेश नै भएन ।’ धेरै लामो अन्तरालपछि यति लामो समय दुईजना मात्र बसेर गरिएको भलाकुसारीमा दुई नेताबीच सुरुमा देशभरका व्यक्तिले लिएका सरकारी जग्गाबारे कुरा भएको थियो । बालुवाटारलगायत देशभरका यस्ता जग्गा सरकारले फिर्ता लिने कामलाई तीव्र बनाएको विषयमा कुरा भएको थियो । त्यस्तै खुलामञ्चमा अनधिकृत तरिकाले बनाएका टहराका विषयमा पनि दुई नेताबीच कुरा भएको थियो ।
त्यसपछि दुई नेता निजी जीवन र सम्बन्धमा प्रवेश गरेका थिए । पछिल्लो समय दुई नेताबीचको सम्बन्धमा आएको उतारचढावबारे पनि समीक्षा भएको बुझिएको छ । दुई नेताबीच नीति, सिद्धान्तबारे कुनै विमति छैन । यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनुमा हिजो दुःखका बेलादेखि आजसम्म योगदानमा कुनै कमी छैन । नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि मित्रवत् प्रतिस्पर्धा भएको छ । अहिले राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश हुँदा पनि दुईजनाको सम्बन्ध कताकता चिसोजस्तो अनुभूति आफूहरूलाई मात्र नभएर कार्यकर्ता तहसम्म भएको आदिबारे नेताबीच भलाकुसारी भएको थियो । एकअर्कासँग नखुल्ने, सार्वजानकि रूपमा संवाद गर्नुपर्ने खालको वातावरण किन भयो, कसरी भयो भन्ने विषयमा पनि दुई नेताले मन माझामाझ गरेको बुझिएको छ ।
पार्टी एकताको विषयमा दुई नेताबीच सोमबार दिउँसो छलफल गरेर टुंगो लगाउने कुरा भएको थियो । नेता नेपालले सोमबार साँझ पारिवारिक कामको सिलसिलामा अमेरिका जाने बताएपछि अध्यक्ष भोलि (सोमबार) बिहान सचिवालय बसेर नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गरौंला, त्यसपछि अमेरिका उड्नुअघि नै दुईजना बसेर पोलिटब्युरो गठनलगायत विषय टुंगो लगाउने बताएका थिए । तर, भोलिपल्ट बिहान सचिवालय बसे पनि दुई नेता बस्ने कार्यक्रम अध्यक्ष ओली अस्वस्थ भएका कारण स्थगित भएको थियो । अस्वस्थताकै कारण ओली बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्न गएनन् । सो बैठकमा नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङले सम्बोधन गरेका थिए । नेता नेपाल सोमबार बेलुकी अमेरिका गरिसकेका छन् । उनी फर्कने कार्यक्रम छ । उनी शनिबार फर्केपछि पार्टी एकताको बाँकी काम टुंगो लाग्ने बताइन्छ ।